Kukho ilizwi elithi: "Uthabatha abantu abangaziwayo, kwaye unika owakho." Kodwa ke umntu ufuna imali apha kwaye ngoku, nokuba akucaci indlela yokubuyisa ngayo. Ngenxa yeemeko ezahlukileyo, amaqhawe ethu atyalalwa njengesiliva, kodwa abayi kunika. Siza kukuxelela ngembali yabo yokuxothwa kunye neebhanki zemali.
USergei (35), umhleli.
Ngaphambi kwenkathazo, ndasebenza kwincwadi eyaziwayo kwaye ehlonishwa kakhulu. Ngelo xesha, iimali-mboleko zinokuthathwa ngokulula kwaye zingenayo i-tape ebomvu. Ukongeza, ngaphezu komsebenzi oyintloko, ndasebenza njengamanqaku okubhala ezizimeleyo kwezinye iincwadi. Ngoko ndagqiba ekubeni ndithenge i-laptop efanelekileyo kwi-credit. Umboleko wawuthathwa kwakhona kwibhankini eqinileyo. Imali ikhokhelwa rhoqo, nyanga zonke, kunye neentlawulo ezincinane. Kodwa kwavela ingxaki yezoqoqosho, kwaye iphephancwadi lethu, nangona udumo lwayo kunye nembali ende, yavalwa. Mna, njengabalingani abaninzi, ndishiywe ngaphandle komsebenzi. Kwafuneka ndibuyise imali mboleko kwiinyanga ezintathu ezizayo. Andikwazanga ukufumana umsebenzi, ngoko ngoku umthombo wam ngeniso oyinzuzo yi-freelancing. Imali ayinelanga ngokwaneleyo ubomi - kuyinto engokwemvelo ukuba akukho ndlela yokuhlawula imali. Ngoko kwiinyanga eziliqela lam ityala lebhanki landa ukusuka ku-3000 lamawaka eedola ukuya kwii-5000 zamawaka.
Ewe, bayandibiza ebhankini, kwaye ngoku bevela kwinkonzo yenkonzo yezokukhusela. Ndiyathetha ngokunyanisekileyo ukuba andinayo imali okwangoku, maye bathathe naluphi na amanyathelo, kodwa andifanele ndibahambise naphi na. Kulungile ukuba ndibe nebhanki elungileyo. Iinkonzo zakhe kumzamo wokuba imali yabo ingadlulanga umgca othile. Kwaye ndiyazi imbali yemboleko yabatyala, apho iinkonzo ezahlukeneyo zezinye iibhanki azibizi nje kuphela umboleki-mali, kodwa zonke iindlela zonakalisa ubomi bentsapho yakhe yonke.
Isidingo sokuboleka sisifo sengqondo. Umnqweno wokubonakala ngathi ucebile nangaliphi na indleko. Ukuba sithetha ngala mabali, ngoko sibona umntu oqhelekileyo, onjengabantu abaninzi, uceba ukuchitha imali yakhe. Wayengakhange athole ngenye indlela
U-Ekaterina (35), umthengisi oncedisayo.
Singazange sicinge malunga nokuthatha imali-mboleko, ukuba kwakungekho nto ebantwini bethu. Umntakwethu omdala wabethwa yimoto. I-vertebral yonakaliswe. Okukhethiweyo kwakuphakathi kokukhubazeka ngokusisigxina kunye nokwenza utyando olubi. Siphila ngokucebileyo, ukusuka kuyo yonke imilinganiselo, ewe, loo mzuzu yayiyi-kwigumbi legumbi ezimbini kunye nomatshini otyetywayo weshumi. Ndandisanda kuphumelela kwiziko, umvuzo wam wawungekho ngokwaneleyo iimpahla kunye nokutya. Umntakwethu wasebenza njengomkhuseli kumashishini abucala. Ukumhlawula umsebenzi wokuqala, sathengisa imoto kabawo. Emva koko, iilesi zokubuyisela zashiywe ngemali umzalwana wam washiya ukuba athenge imoto yakhe. Kodwa umonakalo wawuninzi, kwaye omnye umsebenzi wawungekho. Kwaye kwavela umbuzo apho ukufumana imali. Ekhuselekileyo kwindlu, abazali bathabatha imali efunekayo ebhanki - ba bhalela kum. Ngaba umntakwabo wam Baye badlula ikhosi yokubuyisela. Kwaye kwavela ukuba kufuneka sibhanke imfumba enkulu yemali. Asikwazi ukuguqulela ngokukhawuleza imali. Sibuyisela ityala kwaye ngoku sihlala nje.
Nantsi imeko enzima, inhlekelele. Kwaye andiyi kuthetha nangayiphi na impawu yengqondo ye heroine. Ngenxa yokuba izenzo zakhe azichazi ngengqondo yabantu, kodwa ngenxa yentlekele kwintsapho.
UAlexey (30), intatheli.
Ndathatha imali yokuboleka imali. Imibala, izixhobo, iiikofu. Unyaka kunye nesiqingatha zihlawula rhoqo iibhili. Ndingumyili wendalo. Ngokuqala kweengxaki, ukuhamba komsebenzi kuye kwayeka. Ekugqibeleni, kwafuneka ndibe yibhanki malunga needola ezili-1000. Kukho umsebenzi. Ndinayo ngokwaneleyo ubomi, kodwa akukho mali yokuhlawula ityala. Ekuqaleni ndathetha malunga nokuhlehliswa kweveki. Emva koko ba ndifonela baze bandithuka, bandixela ngamanye amatyelelo. Inkundla, ibhanki ayifuni ukuyifakela. Akunenzuzo kubo, ngokuzenzekelayo amabango abo akayi kuyaneliseka, kwaye i-tape ebomvu ibaluleke kakhulu, kungcono ukuphazamisa ngakumbi inzuzo.
Ngokombono wam, le nsizwa ibona inetyala konke kodwa yona. Abantu abanjalo bahlala bekhohlisa ekukhohliseni ababoleki, ukususela ekuqaleni bevele beyazi ukuba akunakwenzeka ukuba bakwazi ukunikela ngemali, okanye nje bacinge ukuba baya kubuyisela njani
Uqeqesho lootitshala be-kindergarten umqeqeshi wokwenene
Impumelelo emsebenzini, iindlela zokufezekisa
Ndingayifumana njani i-check-up xa ndifaka isicelo somsebenzi?
Ukunciphisa ngokungekho mthethweni komqeshwa
Iibisiki kunye namakhiwane kunye namantongomane
Iimpawu zengqondo zezingane 6-7 ubudala
Ivenkile yokuqala yamaSilayam eLondon yavulwa
Indlela yokugaya kakuhle iinwele zakho: izinto ezine ozoziwa!
Imfihlelo yomtshato ophumelelayo
Ukunyangwa kwamayeza: I-Crohn's Disease
Umququ we sipinashi kunye nomgubo wengqolowa
Ukuzonwabisa ngomcimbi wokutshata komtshato - imincintiswano yemikhosi
Iinqununu ezilula kakhulu
Xa ukusika kunye nokulahla iinwele kunye nezipikili ngoFebhuwari 2018 nge-Oracle (ikhalenda yeLunar)
I-pasta ye-Cheese ibhaka ehovini